တောင်းပန်ခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » တောင်းပန်ခြင်း
Posted by တညင်သား on Sep 29, 2013 in Aha! Jokes, Satire, Copy/Paste, Creative Writing | 21 comments
နိင်ငံရေး လူမှူ့ရေးတွေမှာ အမှားလုပ် မိ/ခဲ့ရင် တောင်းပန်တယ် ကျေးအေးတယ် ဆိုတာ လူ့ယဉ်ကျေးတွေရဲ့ လုပ်ရပ်လို့ ဆိုလေတော့… ကျွန်တော်ကလဲ ရွာလူကြီး လူလတ် ၊ လူငယ် ၊ အပျိုကြီး ၊အပြိုလေး ဟာဂျာ..ဟာဂျာ….. အားလုံးကို တားတား မသိတဲ့ အမှားများ လုပ်မိ/ခဲ့ ရင် တောင်းပန်ပါတယ်နော်…
ခုတလော ရွာမှာ နဲနဲလေး ဆူညံသံလေး ကြားနေမိတယ်..ရွာအတွက် အကျိုးပြု ဆူညံသံလို့ပဲ ထင်မိပါတယ် ရွာလူကြီးတွေလဲ ရွာကြီးစည်ကားရေးအတွက် ခေါင်းတိုက်ဆွေးနွေးနေလေရဲ့..ဂဇတ် ဥပဓေ ကိုပြင်မှရမယ် သဂျီးက ပွင့်လင်းမြင်သာမှု့မရှိဘူး လူသစ်တွေကိုနေရာပေးရမယ် အမျိုးသမီး အခွင့်အရေး..အို စုံလို့စုံလို
အဲဒီအထဲမှာမှ တားတားက ဘယ်နေရာမှ မကူညီနိင်တော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်..
ရွာကြီးအနှောက်ယှက်တွေကင်းဖို့ ရွာကြီးစည်ကားဖို့ တားတား တက်နိင်တဲ့ဘက်ကနေ ကူညီပါစေဗျားးး နော်လို့…
ဆိုတော့ကာ.. ဒီဖြစ်စဉ်တွေက နတ်ကိုင်တာဖြစ်တယ် (နတ်ကိုင်တော့ ဆီဂျီးပေတာပေါ့….) အင်တာနတ် ကို တောင်းပန်ရမယ် ..ဟုတ်
အင်တာနတ်ကြီးကို ပှုဇော်ပါတယ် ပသပါတယ် ရွာသား/သူ တွေအစဉ်ပြေစေဖို့ ကွန်နတ်ရှင်ကောင်းကောင်းမစတော်မူပါ အနှောက်ယှက်များဖယ်ရှားပေးပါ
ရွာကြီးစည်ကားအောင်လဲ ကြည့်ရှု့စောင်မ တော်မှုပါ.. တားတားကိုလဲ ရွာသူလေးတယောက်လောက်ရှာပေးပါ.. အာာာ ဟိ
နောက်တစ်ခါ ခါင်းပြောင်းပြီးတင်ပါ့မယ် ကြိုက်တဲ့ခေါင်းပြော
ရွာအနီးနားမှာ ရှိနေပါတယ် ဦးဦးဆာမိ…ရွာပြန်လာဖို့ စာရင်းထဲမပါပေမဲ့…ရွာထဲလာပီး ထန်းရည်သောက် ခြင်းခတ် ဘောလုံးကန် ပြန်သွားခဲ့ပါတယ် တားတားက မှုးရင် သွေးဆိုးတက်လို့..ရွာထဲစကားမပြောဖြစ်တာပါ. အခုလို အမှတ်ရနေလို့ သိရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်…..
စောင် မ ကြည့် ရှု တော် မူမယ်
ဦးလေး…. ချစ်သူဝေ ဆိုတာ နုတ်ခမ်းမွှေး နဲ့အန်တီကြီးလား စောင်မကြည့်ရှု့ရင် တွေ့လိမ့်မယ် တညင်သားနာမည် အာဟိ
သဂျီးရယ် ခေါင်းတင်မဟုတ် အမှီးပါ တစ်ကောင်လုံးအစုံ လိုချင်ရင်ရမယ် ဖုန်းလေးဆက်လိုက်ယုံပဲ……သူဂျီး ရိုးရာဆိုတာ ပြစ်ပယ်လို့ မကောင်းဘူးနော် တော်ကြာ နတ်မကိုင်ပဲ သဂျီးကတော် အကိုင်ခံရမယ် …ကွီ ကွီ
ခွင့်လွတ်ချင်စိတ် ပေါက်တယ် ဆိုတော့ ခွင့်မလွတ်သေးဘူးဆိုတဲ့သဘော… ရပါတယ် ၂ လပိုင်းကြရင် တကောင်းလုံးတင်ပါ့မယ်…. :hee:
ဒီလို့နဲ့မင်းဟာ တနေ့တခြား ၀ လာ …. နေ့တိုင်း မင်းသိပ်စားတာ…….
ဒီလိုပုံမျိုးနဲ့ဆို …မင်ဂါ ဆောင်တဲ့နေ့မှာ ကေဇီလေး စိတ်ညစ်ရမှာ……..
ကိစ္စတော့ မရှိပါ ကေဇီလေးရာ …မင်းအတွက်စိုးရိမ်လို့ပါ……..:mrgreen:
ဒီလောက်နဲ့ ကျေနပ်တယ်ပေါ့ u kyein ….. နောက်ထပ်လဲ ရှိတော့ဘူးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
သနားစရာ ၀က်ခမျာ သေတာတောင် နှာခေါင်းပေါက်ထဲ ပိုက်ဆံထိုးအထဲ့ခံရသေးတယ်နော်။
တညင်သား ပျောက်တာကြာလို့ ၀က်ခေါင်းလောက်နဲ့ မကျေနိုင်ဘူး။
အန်တီ တူမလေး နေကောင်းလားးးးးးးးး
ဦးကြီးမိုက်ကလဲဗျာ…မေ့နေတာမှ ခပ်ကောင်းကောင်း …ဦးမိုက်လုပ်မှပဲ တကယ်လာရင် ဘိုလုပ်မလဲ ရွာထဲမန်ဘာအရေအတွက်က နဲဘူးဗျ… တကယ်လာလည်နေကြအုံးမယ် …နောက်တာပါနော့ တကယ် အတည်……..:kwi:
ခညား ဂန့်တွားဘီ ထင်နေဒါ ..
နောက်ခါ အိုက်လို မထင်အောင် ပို့စ်တွေ တင်ဂျ ..
နားရွက်လေး ၂ ဖက် ကို ဖြတ်ပြီး သုတ်စားချင်တယ်…။
တတ်နိုင်သမျှ အကူညီပေးချင်ဒယ်ချိုလို့ …. ကူညီဘာဦး … အိုက်နှာခေါင်းထိပ်က နှစ်ရွက်လောက်ပဲ … ။
လုပ်တာ မလုပ်တာက နောက်
ဒီကို အရင်ပို့လိုက် ကိုရင်ရေ့